Madaxweynaha Somaliland oo kulan laba-geesood ah la yeeshay Wefti ka socda Turkiga iyo waxay ka wadahadleen | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweynaha Somaliland oo kulan laba-geesood ah la yeeshay Wefti ka socda Turkiga...
Madaxweynaha Somaliland oo kulan laba-geesood ah la yeeshay Wefti ka socda Turkiga iyo waxay ka wadahadleen
Hargeysa-(Berberanews)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa maanta kulan la yeeshay Wefti ka socda dawladda Turkiga, kuwaasoo shalay booqasho shaqo ku yimi dalka. Isla markaana, booqday meelo kala duwan oo ay mashaariic ka fuliyeen.
Sidaa waxa lagu sheegay War-Saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Afhayeenka Madaxweynaha Cabdillaahi Maxamed Daahir (Cukuse) oo ku saxeexnaa, warkaas oo faahfaahsanina waxa uu u qornaa sidan:-
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa uu maanta Xafiiskiisa ku qaabilay wefti ka socda Hay’adda Dawladda Turkiga u qaabilsan wax-wada qabsiga iyo xidhiidhka oo hoos timaada Xafiiska Ra’iisal wasaaraha ee Jamhuuriyada Turkiga.
Abdulahad Kokdagi oo ah TIKA SOMALI PROGRAM COORDINATOR ayaa madaxweynaha uga waramay ujeedada Socdaalka uu weftigiisu ku yimid dalka waxaanu sheegay inay Dawladdiisu diyaar u tahay sidii ay Somaliland uga caawin lahayd, Baahiyaha Horu-marineed hadii ay noqon lahayd wadooyinka, caafimaadka, waxbarashada iyo wixii la mida.
Madaxweynaha Somaliland ayaa Dawladda turkiga ku amaanay fir-fircoonida xidhiidhka caalamiga ah ee ay la leedahay Dunida inteeda kale. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in uu xidhiidh fac-weyni ka dhaxeeyo Turkiga iyo Somaliland.
Ugu danbayna Madaxweynuhu waxa uu ka waramay baahida ay Somaliland u qabto kaalmada Turkiga oo uu sheegay inuu ku rajo weyn yahay inay rummoobi-doonto, wasiiradda, Qorshaynta Qaranka iyo Horu-marinta iyo Macdanta, Tamarta & Biyaha, ayaannu u xil-saaray inay weftiga u qadimaan baahiyaha Lama huraanka ah ee ay Dawladda Turkigu ka caawin karto Somaliland.”
Previous articleMarch 18: maxaa dunida ka dhacay maanta oo kale.Video
Next articleVideo: qaar ka mid ah dhallinyarada Berbera ku nool oo ku dhawaaqay inay u tartamayaan Doorashada goleyaasha deegaanka